दिदीको छोरासँगै घरबाट निस्केर भागे दुइजना? - Sano Aawaj
दिदीको छोरासँगै घरबाट निस्केर भागे दुइजना?
२० भाद्र २०७८, आईतवार by sanoaawaj
भएभरका आफन्त तथा चिनेजानेकासँग सोधखोज गर्दा समेत उनको पत्ता लाग्न नसकेको घरका मान्छेले बताएका छन् । घरमा कुनै झैझगडा नभएको माहीकी सासू लालुमाया परियार बताउँछिन् ।
रोहितले भने सानीमाले आफूलाई बोर्डरसम्म ल्याई एक्लै गाडी चढाएर पठाएपछि केही थाहा नभएको बताएका छन् । सुरजले ससुरालीमा फोन गरेर बुझ्दा माहीकी आमा ९सासू० ले ‘अब माहीलाई पर्खेर बस्नुभन्दा अर्कै बिहे गर्नु बेस ज्वाइँ’ भनेको सुनाएका छन् ।
Prevके हो ‘स्क्रब टाइफस’? जुन कोरोना संग मिल्दो जुल्दो छ
Next५५ वर्षको उमेरम श्रीमानले अर्की लिएर हिडे, आमा म रि भन्छन् अस्ट्रेलियाका छोराछोरी